पे*स्तोल चो*रीको आरोप लागेका प्रहरीका पूर्वहवल्दार ३० वर्षपछि निर्दोष ठहर, के भन्छन् पिडित ? (भिडियो) - Sidha News
पे*स्तोल चो*रीको आरोप लागेका प्रहरीका पूर्वहवल्दार ३० वर्षपछि निर्दोष ठहर, के भन्छन् पिडित ? (भिडियो)
गोरखा। गोरखा ठिगुरेश्वाराका ५६ वर्षीय खुलबहादुर कुँवरको परिवारमा यतिखेर नसोचेको खुसी भित्रिएको छ । कारण, २६ वर्षको भरभराउँदो उमेरमा गर्दै नगरेको अपराधको दाग ३० वर्षपछि मेटिएको छ । २०३६ सालमा नेपाल प्रहरीमा भर्ना भएका कुँवरलार्इ २०४४ सालमा पेस्तोल चोरीको आरोप लाग्यो।
अदालतले पनि दोषी ठहर गर्यो । प्रहरीको मध्य क्षेत्रीय तालिम केन्द्रमा कार्यरत कोतमा रहेकामध्ये २ पेस्तोल हराएका थियो । २०४८ सालसम्म उनी कैद बस्नुपर्यो । यो अवधिमा भोगेको यातना, सामाजिक र पारिवारिक क्षतिको पक्ष बेग्लै छ । छँदाखाँदाको जागिर खोसियो । जीवनमा वृत्तिविकासका सबै ढोका बन्द भए । जीविका चलाउन गाउँ फर्किएर खेतीपाती गरे । बिनाकसुर लागेको आरोपमा भोगिइसकेको सजाय ३० वर्षपछि उल्टिएको छ।
२०५९ मा वास्तविक पेस्तोल चोरेको दावी सहित घनश्याम अधिकारीले प्रहरीसमक्ष आत्मसर्मपण गरे । त्यसपछि कुँवर सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगे । सर्वोच्चले बल्ल जागिर अवधिभरको सेवा सुविधा र पेन्सन समेत दिनुपर्ने आदेश गरेको छ । कुँवर त सरकारी जागिरे भएकाले रोकिएको तलब र पेन्सन पाउने भए । तर यसरी अदालत वा राज्यका अन्य निकायबाट हुने गलत निर्णयका शिकार अरू पनि हुन सक्छन् । त्यस्ता पीडितलार्इ क्षतिपूर्ति दिने कानुन भने बनेको छैन।
यसरी अनाहकमा जेल जीवन बिताउनुपर्ने अवस्थालार्इ मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७२ सालमै कानुन बनाउन सरकारलार्इ आदेश दिएको थियो । कुँवरकै फैसलामा पनि त्यो आवश्यकता दर्शाइएको छ । तैपनि, कानुन बनाउन दिइएको छैन।
कान्तिपुर टिभीले तयार पारेको यो भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस: